राष्ट्रिय सभामा पनि गठबन्धनको वर्चस्व कसले कहाँ जिते ? (नामावली सहित) « Ramechhap News
राष्ट्रिय सभामा पनि गठबन्धनको वर्चस्व कसले कहाँ जिते ? (नामावली सहित)
राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि बुधबार भएको निर्वाचनको सबै परिणाम सार्वजनिक भएको छ । बुधबार राति सार्वजनिक परिणामअनुसार एमाले, कांग्रेस र मा‌ओवादी केन्द्रका अधिकांश उम्मेदवारहरु विजयी भएका निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । परिणामअनुसार वाम गठबन्धनको वर्चस्व देखिएको छ ।
बुधबार २ नं प्रदेशबाहेकका ६ वटा प्रदेशहरुमा मतदान भएको थियो । २ नम्बरमा सबै उम्मेदवारहरु निर्विरोध निर्वाचित भएपछि चुनाव नभएको हो । प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन महिला, एक दलित र एक अपांगता/अल्पसंख्यकसहित ५६ जना निर्वाचित हुनुपर्नेछ। ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट कम्तीमा एक महिलासहित तीनजना मनोनित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित/निर्विरोध भएकाहरुको नामावली